200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105 300-101 300-206 300-070 70-417 210-260 210-060 200-355 300-208 CISSP 300-135 210-065 300-209 70-243 70-480 CCA-500 2V0-621D 210-451 400-051 E05-001 1Z0-052 70-410 640-916 VMCE_V9 810-403 070-464 070-243 700-802 70-246 FCBA GPHR DEV-401 C2090-610 SY0-401 712-50 ADM-201 700-039 312-50 MA0-101 648-244 SK0-004 ASF 70-494 70-673 500-005 1Z0-060 C9560-503 640-875 N10-006 98-367 70-534 NS0-505 70-342 CHFP 070-410 640-878 1V0-603 1Z0-804 C8010-250 312-50V9 C2150-508 98-368 CLOUDF 70-411 70-461 220-901 70-488 070-341 PK0-003 E20-547 70-412 70-686 500-285 CISM 101-400 102-400 PDM_2002001060 JN0-100 642-883 CAP 070-347 Qiso Jaceyl oo dhab ah: Lamaane 77 sano kadib ku guuleystay Jaceylkooda isna guursaday iyagoo 90 jir ah | UfeynNews.com
maxaadiro diini ah
Qiso Jaceyl oo dhab ah: Lamaane 77 sano kadib ku guuleystay Jaceylkooda isna guursaday iyagoo 90 jir ah
Oct 26, 2015 - jawaab
Ma jirto Qiso la mid ah marka laga reebo Qisooyinka lagu soo bandhigo Filimada iyo Riwaayadaha, balse ugu dambeyn jaceylka Mustafa and Dondo oo labadoodaba u dhashay dalka Turkiga, ayaa jaceylkooda oo soo socday 77 sano kusoo dhamaaday Guul iyo farxad.
Sanadkii 1938 tuulo yar oo lagu magacaabo kahramanmaraş kuna taal Koofurta Anatolia ee dalka Turkiga, ayaa Mustafa Kara oo markaas ahaa 15 sano jir waxaa haleelay jaceyl uu u qaaday gacalisadiisa Dondo Kirash oo iyadu markaas ka weyneyd 3 sano.
Mustafa oo maalinba maalinka ka dambeeyo uu kusii xoogeeysanayay Jaceylka Dondo, ayaa waalidkiisa u sheegay inuu doonayo in loo guuriyo Dondo Kirash,, laakiin dalabkiisa waa laga diiday waana uu niyad jabay.
Waxa uu ku biiray Ciidamada Milatariga:
“Waxaan dareemay niyadjab, waxaan ku sigtay inaan is-dilo, kadib ayaan ku biiray ciidamada” ayuu Mustafa u sheegay TV-ga Aljazeera.
Afarsano kadib markii uu ciidamada ku biiray, Mustafa ayaa ku laabtay Tuuladii uu kazoo jeeday, waxaana uu raadiyay Gacalisadiisa Dondo, balse nasiib xumo waxaa loo sheegay ineey guursatay oo ay reer yeelatay, waxaana uu go’aansaday inuu isaga haajiro Tuuladiisa, waxaana uu u wareegay magaalada GOXON si uu nolol cusub halkaas uga bilaabo, halkaas ayuuna ku guursaday kuna dhalay caruur.
Waxaa macquul ahayd in Qisada halkaas ku dhamaato, sida Qisooyin badan jaceyl oo ku dhamaaday murug iyo xanuun, laakiin Qadarta ALLE ayaa ahayd mid u qarsan Mustafa iyo Dondo, waxaana dhacay wax aysan fileyn labadoodaba.
Xaaskii Mustafa waa dhimatay caruurtiisana waa koreen, waxaana loo wareejiyay dhismo lagu xanaaneeyo dadka da’da ah, maalmihiisi ugu horeeyay ee uu dhismaha ku sugnaa ayaa waxaa usoo dhawaatay Haweeneey iyadana duq ah oo meesha loo keenay in lagu xanaaneeyo, waxayna ku tiri “Mustafa maxaad halkaan ka sameyneysaa?”.
Mustafa oo la yaaban ayaa fiiriyay uguna jawaabay..”kuma aqaan qofmaa tahay?”.
Dondo ayaa ugu jawaabtay: “Waa aniga Dondo miyaadan I garaneyn?”.
Halkaan ayay markale ka bilaabatay sheekadooda, labadan Mucaashaq ee gaboobay ayaa is dhaafsaday sheekooyinka 77 sano ee ay kala maqnaayeen, waxaana qofba qofka kale uu isku dayay inuu ka qafiifiyo dhibkii iyo rafaadkii ay soo mareen.
Mustafa iyo Dondo ayaa ugu dambeyn isku raacay ineey is guursadaan, laakiin go’aankooda hadii markii hore ay kazoo horjeesteen waalidkii dhalay, markaan waxaa kazoo horjeestay Caruurtii ay dhaleen.
Waxay isku dayeen ineey baxsadaan:
Dondo ayaa ku dhibtootay mucaaradada ay kala kulantay caruurtii ay dhashay in badan ayayna iska ilmeyn jirtay, waxayna Mustafa marwalbo ku dhihi jirtay “Iga kaxeey meeshaan” “Iga badbaadi halkaan”.
Mustafa oo u dulqaadan waayay murugta haysa gacalisadiisa ayaa isku dayay inuu la baxsado xili habeen ah, laakiin Ilaaladii dhismaha lagu xanaaneeyo Duqoowshinka, ayaa kashifay arinkooda oo ogaaday.
Maamulihii dhismaha ayaa u yeeray Mustafa iyo Dondo, waxaana uu u sheegay in wixii ay sameeyeen aysan ahayn wax wanaagsan, laakiin Mustafa ayaa ku yiri “Hadaan leey guurin Dondo waan la baxsanaa mana haysto go’aan kale.
Duqa magaalada GOXON oo ay gaartay Qisada Mustafa iyo Dondo, ayaa la qiirooday go’aansadayna inuu soo faragaliyo arintooda, waxaana uu ku guuleystay in caruurtii ay dhaleen Mustafa iyo Dondo uu ku qanciyo in laysu guuriyo .
Ugu dambeyn sugitaan soo socday 77 sano ayaa waxaa is guursaday Mustafa iyo Dondo, waxaana loo wareejiyay Guri gaar ah oo loo diyaariyay, waxayna da’dooda hada dhaaftay 90 sano.
“Alxamdulilaah waan faraxsanahay, waxaa mahad leh Allihii na kulansiiyay markale aniga iyo gacalisadeyda, waxaan Ilaah ka tuugayaa inuu kulmiyo dadka isjecel, haba kazoo wareegato 80 sano” ayuu yiri Mustafa oo ku faraxsan inuu 77 sano kadib guursado Dondo.
Designed By Madiina ICT
© 2015 UfeynNews.com - All rights reserved.